Donald Tusk "Manontany tena aho hoe manao ahoana ny toerana manokana any amin'ny helo ho an'ireo nanohana ny Brexit": Martin Vrijland
Donald Tusk "Manontany tena aho hoe manao ahoana ny toerana manokana any amin'ny helo ho an'ireo nanohana ny Brexit"
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 6 Febroary 2019	• 5 Comments
Ao amin'ny kabary manaraka hoy Donald Tusk: "Manontany tena aho hoe ahoana no toerana manokana ao amin'ny helo mitady ireo izay nampirisika ny Royaume-Uni sy Gibraltar fitsapan-kevibahoaka mpikambana amin'ny Vondrona Eoropeana, tsy misy na dia manana ny mihazakazaka Sketch io drafitra" (3: 32 min.). Ny fiteny fermer sy ny teny manontolo dia mazava tsara fa ny script, izay efa ato ity lahatsoratra ity nofaritana, dia mamelatra kokoa hatrany.
Tusk tena mitora teny ity varavarana izay mandeha akaiky ho Theresa May be no sarotra ny faritra ny Tranon'ny Commons hiatrehana ny hafa ho any amin'ny sisin backstop olana amin'ny Irlandy Avaratra ho any Bruxelles. Raha resaka votoaty, tsy mbola fantatsika hoe inona marina io hevitra io, nefa efa nilaza i Tusk fa tsy misy fifampiraharahana. Ao amin'ny 2: 18 min Tusk indray milaza fa tsy misy toerana ho an'ny sahoan-dresaka, satria ny EU ny "fiadanana tetikasa" izay tsy hanova izany. Fifanarahana Zoma tsara avy amin'ny 1998 mikasika ny fandriampahalemana any Irlandy Avaratra. Ao amin'ny 1: 27 min. Manambara mazava mihitsy aza izy fa ny firenena 27 ao amin'ny EU dia tsy hanolotra soso-kevitra vaovao.
Ireo Vondrona Eoropeana ny fihavanana isika dia mahita mazava ho azy dia voaporofo taratasy fanomezam-pahefana ady tany Yogoslavia, Ukraine ary ny hafa rehetra haniraka miaramila "mpampandry" any amin'ny tany izay olon-dozabe mahatsiravina tsy maintsy hanaovana ny tandrefana miendrika ho demokrasia sy ny fametrahana ny kilalaon'ny ho an'ny fantsom-pahitalavitra ao Etazonia sy ny alikany amin'ny dihy EU. Tsy miresaka momba ny fandriam-pahalemana an'i Donald Tusk mihitsy, satria toa sahala amin'ny hoe misy kibon-dranom-borona ihany koa izy. Tamin'ny 10 April 2010 dia nisy filoham-pirenena tonga nanàla ny rivotra mistery Lech Kaczyński, ny vadiny ary ireo olo-manan-kaja maro hafa. Ny fanadihadiana momba ny loza vokatry ny rivotra dia niankina tamin'ny andraikitr'i Donald Tusk ary natao tamin'ny fomba samihafa voasakana.
Tamin'ny famoahana ny kabariny dia naverin'i Tusk indray ny heviny, dia ny heveriny fa ny ankabeazan'ny Britanika dia tsy miandry ny Brexit mihitsy. Ny fihetsik'izy mivandravandra dia maneso fa tsy miandry intsony ny fifampiraharahana izy, fa te-hanohy izany Brexit izany i Theresa May. Raha ny marina dia misento izy eo ambany fitarihan'ny "Tsara, te-hitranga ireo teny filamatra ireo, noho izany dia tsy maintsy manana latabatra hafa isika". Ny hafanam-po dia mamoaka azy. Kanefa mitandrema: fa ny rehetra dia natao, satria ny Brexit dia tsy natao hahomby. Izany Angletera sy Gibraltar Vondrona Eoropeana mpikambana fitsapankevi-bahoaka izay ihany no manome leveling ny toe-karena sy ny fampifanarahana ny Euro-farantsanao fifanakalozana tahan'ny, miaraka amin'ny tanjona farany izay mahita na iza na iza tany Eoropa fa "nasionalista", "tsikombakomba" sy "mivaky mikoriana" fotsiny mahatonga lehibe ara-bola fahavoazana. Mba hahatonga ny fahatsiarovan-tena ho olana goavana toy izany dia tsy hahita ny olo-tsotra. Raha ny marina, nisy ny "fifampiraharahana be".
Ny mpirotsaka an-tsehatra lehibe indrindra amin'ny Brexit, Nigel Farage, dia nanaisotra ny fanalahidy tokoa rehefa nanana ny fahafahana hitondra ny Fanjakana Royaume (tsara fanahy) avy any Eraopa, dia efa marika fa tsy natao mihitsy ny Brexit to succeed. Ireo teratany tsy manan-tsiny i Theresa May dia afaka nandray ilay asa. amin'ny 4 Jolay 2016 dia naminavina aho Efa tsy mahomby ny Brexit. Ny hetsi-panoherana isan-karazany ao amin'ny kabinetrany, anisan'izany ny fananganana an'i Boris Johnson, dia naheno ny fahatsapana ny tsy fahombiazan'ny mponina. Ianareo dia milalao amin'ny sehatra goavana miaraka amin'ny fihetsika madio mba hilalao ny lalao 'Ordo ab Chao': mamorona korontana, mitarika ny fihetsiketsehana ary avy eo azonao atao ny manovo hery bebe kokoa aminao. Olana, fihetsika, vahaolana, hatrany hatrany.
Bron link rohy: wikipedia.org, wikipedia.org
Ny Brexit sy ny krizy ataon'ny governemanta no fomba tsara indrindra hanohanana ny fahefana ananan'ny firenena
Ny vahoaka iray ho an'ny fanjakana ve ny mpitondra na ny avy any Eoropa?
Ny fiafaràn'ny Brexit hita maso taorian'ny tsy fankasitrahan'ny Trano Britanika of Commons
Ny fampielezan-kevitra lainga amin'ny haino aman-jery manodidina an'i Venezuela
Mijery tele na sarimihetsika na sarimihetsika isan'andro ve ianao? Avy eo ianao dia feno ny hypnosis ary tsy matotra
Tags: Brexit, Donald, EU, Featured, helo, helo, in, toerana, toerana, toerana, manokana, Special, teny, Tiorka, Video
6 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 48
Oh eny sy any Angletera dia mazava ho azy ireo fa mandalo amin'ny Tusk ... fa izany rehetra izany dia ampahany amin'ny asa atao
ZalmInBlik nanoratra hoe:
6 Febroary 2019 ao amin'ny 20: 21
Na i Lucifer aza dia ampidirina amin'izany fa tsy tokony ho crazier 😀
6 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 10
Indray mandeha ianao dia mijoro ao ambadik'ilay birao fanaovana kaonty any McDonalds ary ny fotoana iray hafa ianao dia mpandahateny ho an'ny EU
MB. nanoratra hoe:
10 Febroary 2019 ao amin'ny 17: 51
Ny tranonkala mahaliana dia mifanaraka amiko http://freenations.net/
Efa novakianao ny boky momba ny fanekena ny fifanekena momba ny fifanekeny tao Angletera dia ny famerenana ny lalàm-panorenana (Fodiana any Maastricht). Tiako ho fantatra raha mihatra amin'ny Holandey koa izany.
Tany aloha ianao dia niaro ny firenenao, ankehitriny dia omenao azy amin'ny alalan'ny sonia vitsivitsy.
10 Febroary 2019 ao amin'ny 17: 52
... na atsipinao any amin'ny varotra (tsena).
« Minisitry ny Belzika Joke Schauvliege dia nametra-pialana taorian'ny confession mikasika ny fametrahana fihetsiketsehana amin'ny alàlan'ny sekretera miafina
Ny antony mahatonga ny lisansa ho an'ny lisansa, ny filalaovana sikidy ary ny transgederisma ho lasa lavitra »
Total visits: 8.547.489
Diniho fotsiny ny antony mahatonga ny afo Notre-Dame
Ny taova printy avy amin'ny ADN ao amin'ny vatany dia zava-misy: jereo eto ny fo 3D voalohany natao printy
Ny fironan'ny afo afo ao Al-Aqsa Mosque Jerosalema (izay tsy maintsy manao lalana ho any amin'ny tempoly)?
"Mpampianatra amin'ny sekoly ambaratonga ambony mitondra otrikaretina" dia manindrona hatrany amin'ny vakoka tsy maintsy atao
Inona ireo mari-pamantarana izay ahafahanao milaza fa ny Julian Assange Wikileaks dia PsyOp?
Camera 2 op Mark Rutte sy ny vesatry ny fitsapankevi-bahoaka Okrainiana
Martin Vrijland op Diniho fotsiny ny antony mahatonga ny afo Notre-Dame
MB. op Diniho fotsiny ny antony mahatonga ny afo Notre-Dame
Wilfred Bakker op Diniho fotsiny ny antony mahatonga ny afo Notre-Dame
Mifandraisa anjara amin'ny 1.575 hafa